News na Otu | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: News na Society
Ihe dị iche iche nke mpaghara Samara
Ógbè Samara dị iche iche na akụ ndị sitere n'okike ya: e nwere ihe karịrị ebe nchekwa 300 na nnukwu mpaghara ya. Nke a bụ ebe a na-echekwa ụdị osisi na ụmụ anụmanụ kachasị. A na-emepụta ihe ọkụkụ n'ókèala a ...
Akwụkwọ ozi ọma nke nwa m nwanyi si n'aka Mama. Akwụkwọ ozi maka nwa nwanyị si mama na papa dịka nke ahụ
Na ndụ, e nwere ọnọdụ dịgasị iche iche, ọ bụkwa mgbe mgbe ka nne na nwa nwanyị apụghị ikwu okwu n'obi, na-ekpughe ihe nzuzo ha na nchegbu ha. Na nke a, ị nwere ike ...
Rostov-on-Don: ọnụ ọgụgụ obodo ahụ. Onu ogugu na ihe omuma nke Rostov-on-Don
Ọnụ ọgụgụ nke Rostov-on-Don taa bụ karịa 1 nde 100 puku. O ji obi ike na-enwe ọnọdụ iri n'ọnọdụ ndepụta obodo dị na Russia site na ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya. A mụrụ onye nde mmadụ na 1987 ...
Akụkọ ihe mere eme na nkọwa nke ugwu mgbawa Eyyafyatlayokudl
Site n'oge ruo n'oge, ugwu mgbawa na-atụ egwu ma na-adọta ndị mmadụ n'onwe ha. Ruo ọtụtụ narị afọ, ha pụrụ ihi ụra. Otu ihe atụ bụ akụkọ na-adịbeghị anya nke ugwu ugwu Eyjafjallajokull. Ndị mmadụ na-azụlite ugwu n'ugwu nke ọkụ, merie ọnụ ọnụ ha, ...
7 February. Ememe na ihe mere eme n'ụbọchị a
Dị ka kalenda Gregorian si kwuo, a na-ewere 7 February dịka ụbọchị 38 n'afọ. N'akụkọ ihe mere eme nile, e nwere ọtụtụ ihe na-echefu echefu n'oge a kapịrị ọnụ. Nke a bụ ihe isiokwu a ga-etinye aka. Winter egwuregwu ụbọchị ...
Ụmụ nwanyị Russia kasị baa ọgaranya: ọkwa
Edeela magazine "Forbes" maka ọtụtụ afọ n'ahịrị. N'afọ a, ọ gụnyere 30 so na statuses sitere na $ 60 nde na $ 1 ijeri ...
Ememe Tea na China. Ihe osise nke tii
N'ime ndụ ndị Chinese, tii na-anọ n'ebe pụrụ iche, ịṅụ mmanya na-aghọkwa ihe dị iche iche nke ememe tii. Ndị China na-ahọrọ tii ka ha na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ọ bụla ọbụna n'oge okpomọkụ: ọ ...
Ilu banyere nkịta. Ilu na okwu maka ụmụaka
Ilu na okwu nile bu ihe di nkpa nke omenaala obodo obula. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-eji ilu na okwu ọnụ na-egbu oge. Ya mere, ha dabara adaba na-ekwu okwu. Onu ogugu ndi a mara ...
Ihe osise ndị dị na Moscow: oge ​​a na akụkọ ihe mere eme
Obodo Moscow dị ịrịba ama ọ bụghị naanị n'ihi na ọ bụ isi obodo nke mba anyị. O chebewo ọtụtụ ihe ncheta nke ọdịbendị omenala mba. N'ihe dị ka narị afọ 15, ụlọ ọrụ Moscow aghọwo ọnụ na-ekwuchitere omenala obodo. Ntube ...
Baobab ihe omimi: osisi ebube
Ezigbo osisi baobab pụrụ iche na ihe niile: nha, oke, na ndụ ndụ. Ọbụna osisi ọ bụla na-enwe mmasị n'ịhụ nnukwu ndụ ya. Baobab bụ osisi dị ịtụnanya. Ọ bụ onye nnọchiteanya kacha egbukepụ nke ezinụlọ Malvova, ...
Kedu onye na-eme mkpọtụ ahụ, ònyekwa nyere aha ọjọọ a?
N'otu oge, onye ọzọ gụrụ akwụkwọ ma gụọ akwụkwọ bịara otu ezinụlọ maara ihe. Na usoro nke nnọkọ, dị ka ọ na-emekarị, ha malitere ikwu okwu banyere okwu gbasara isi, karịsịa, banyere ndị na-akwaga mba na-akwadoghị, ...
Anyị na-amụta otú oyi squirrels oyi
Ndụ nke squirrels na ọdịdị na-enweta, dị ka a na-achị, na nnukwu ohia. Ndabere nke anụmanụ na-edozi ahụ bụ osisi osisi. Ọ bụ ya mere squirrel ji etinye aka na oke ohia, ebe o nwere ike inweta onwe ya ...
Okpomọkụ na Saịprọs ruo ọtụtụ ọnwa
Agwaetiti Saịprọs, nke ọtụtụ ndị hụrụ n'anya, bụ ihe ama ama maka osimiri mara mma, ihu igwe na-acha na ihu igwe na-ekpo ọkụ, na-ekpo ọkụ. N'oge ọkọchị, ikuku na-ekpo ọkụ nke ukwuu nke na-ekpo ọkụ na Saịprọs gafere akara a na 35 ° С. Lee…
Nri anụ: nkọwa, larvae, oge ndụ
Uji dị n'usoro Diptera, nke nwere ihe karịrị otu narị na puku iri ise na ụwa. Na ole na ole n'ime ha na-ebute ọrịa, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-adịghị njọ, dịka butterflies. Ya mere, ihe ...
Etu esi aghata okpukpu - uzo na uzo
Mkpụrụ obi ara bụ otu n'ime ụzọ isi kwụsị lactation, nke ndị inyom na-achọ ịnyefe nwa ahụ ka ha na-azụ nri. Mana usoro a bụ ihe ize ndụ. Ọ bụrụ na ị maghị otú ị ga-esi ejiji obi gị na ...
Razors "Chic": ụkpụrụ nke àgwà, ntụkwasị obi na ugwu
Nri ọ bụla nke ejiji dị ọcha ma dị ọcha n'enweghị ọkụ, ihe na-ewe iwe. Ịcha mma nke ọma bụ ụdị nkà nke chọrọ ka mma. Ọrụ kachasị n'ime ya bụ ngwá ọrụ ahụ. Taa ...
Mmeghari ohuru na adighi emeghari ohuru - iji ezi uche mee ihe. Ngalaba nke sitere n'okike
Ebumnuche ndị dị mkpa dị mkpa maka ọha mmadụ. Ha na-eme ihe dị ka isi ihe na-akpata mmepụta ihe. Ufodu ulo oru, nke bu oru ugbo, na-adabere na ihe onwunwe. Ihe ndị a ...
Ihe agha na ihe ngosi nka nke Moscow na Moscow mpaghara (foto)
Na Moscow, onye ọ bụla nwere ike ịchọpụtara onwe ya ọnụ ọgụgụ dị ukwuu. Nnukwu mmasị n'etiti ndị ọbịa bụ ihe ndị agha na-eme na ihe ngosi nka nke Moscow. E gosipụtara ihe ndị a site na oge Agha Ukwu Patriot ruo taa. ...
Kedu ihe na-eme ka a na-emepụta ihe a na-eme. Ịzụlite na ozuzu carp
N'ebe ndị a na-azu kaabe, e nwere azụ dị egwu ọlaọcha. N'ịbụ onye ndụ ya dị mma na nnukwu ibu, ọ ghọrọ ọkacha mmasị nke ọtụtụ ndị ọkụ azụ. Ọ bụ ya mere ha ji akpachapụ anya na-amụ banyere àgwà na oyiyi ya ...
Mpi zuru oke. Ihe atụ nke asọmpi zuru oke
Ịkwalite mmepụta, belata mmepụta mmepụta, ịmepụta usoro niile, ịmepụta usoro ụlọ ọrụ - ihe a nile bụ ọnọdụ dị mkpa maka ịzụlite azụmahịa nke oge a. Kedu ihe kasị mma nwere ike ime ka ndị ahịa mee ihe a niile? ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,573.